Sida laga soo xigtay L0vetodream waxaa jiri doona hal la yaab leh inta lagu jiro Kirismaska ​​| Waxaan ka socdaa mac
Waxaan soo marnay sanad aad u qariib ah. Aafada ayaa wax walba rog rogtay. In kasta oo Apple aysan joojin qorshayaasheeda aaladaha cusub, cusbooneysiinta, processor iyo wixii la mid ah, dhacdooyinka bandhigga waxaa loo soo saaray qaab ka duwan sanadaha kale. Markaa wax lala yaabo maahan inaan wali arki karno wax cusub oo loogu talagalay Kirismaska. Hal hadiyad oo dheeraad ah oo aad ku sagootin karto 2020. Uguyaraan taasi waa waxa L0vetodream ay la tahay.
Falanqeeyaha Apple iyo xatooyada wararka, L0vetodream wuxuu ku dhawaaqay Twitter, sida caadadiisu tahay isaga, in layaab cusub uu ka imaan doono Kirismaskan Apple. Dabcan, ma aysan cayimin waxa ay ku saabsan tahay mana garan karno haddii ay tilmaamayso qalab cusub ama barnaamij cusub, mashruuc ama waxa.
Wax intaas ka badan ma jiraan ereyada xasaasiga ah, waa waxa qofkani ku qoray bartiisa tweet-ka ee la daabacay dhowr maalmood ka hor:
"Waxaad ka heli doontaa lama filaan ah Kirismaska ​​Apple" (PS: «jiilaalka gaar ah, u fiican xilliga jiilaalka
Waxaad ka heli doontaa lama filaan ah Kirismaska ​​Apple （PS exclusive Jiilaal gaar ah 、 u wanaagsan jiilaalka）
- 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) November 14, 2020
Waxaan ku celcelineynaa inaynaan sifiican u aqoon waxa uu ula jeedo farriintan lagu daabacay shabakadaha bulshada. Waxay noqon kartaa kaftan ku saabsan qayb ka mid ah astaamahan, laakiin waxay sidoo kale noqon kartaa wadada saxda ah iyo Apple doonayo inuu siiyo layaab cusub ka hor dhamaadka sanadka.
mala-awaalku wuxuu noo horseedaa inaan ka hadalno soo-bandhigista suurtogalka ah ee AirTags ama AirPodsStudio, inkasta oo ay naadir ku tahay inuu u soo bandhigo sidaas oo kale, laakiin inuu ku dhawaaqo dhacdo cusub iyo sidoo kale, yuu isagu noogu soo bandhigay mid ka mid ah saddexdii dhacdo ee hore loo qabtay? Marka tani uma badna inay dhacdo.
Waxa kale oo jira hadal ku saabsan nooc cusub oo ka mid ah barnaamijyada software-ka, in kasta oo ay haddana tahay wax aan macquul ahayn, maaddaama ay wararku u baahan yihiin dhacdo weyn oo cusbooneysiinta yaryarna aaney xambaarsanayn dareen badan. Sidaa darteed, suurtagalnimada in ay tahay wax la xiriira adeegyada khadka tooska ah ee shirkadda ay hesho xoog. Apple Tv +, Apple Music, Apple One ama midkoodna. Qaar ka mid ah dalacsiinta cusub ee loogu talagalay Kirismaska, Kuma habboona in badan fikradda ah inay tahay “jiilaalka oo kali ah, u fiican jiilaalka »
Sababtoo ah. Qaarkood waxay dib uxasuusteen inaan haysan karno wax dhammaaday 2014. Xayeysiinta "12ka maalmood ee wax bixinta" way soo noqon kartaa taas ayaa la bilaabay Kirismaska.
Waan sugi doonaa doonaya inuu arko waxa dhacaya Kirismaska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Sida laga soo xigtay L0vetodream waxaa ku soo kordhaysa wax lala yaabo Masiixiga
Moodooyinka gaboobay ee MacBook Pro oo leh dhibaatooyin culus oo leh macOS Big Sur